जिजीविषा: Multiple login in yahoo Without Using any Software
के तपाईंले एउटै कम्प्युटर बाट एकै चोटि २ वटा अथवा एक भन्दा धेरै id बाट yahoo messenger चलाऊनु भएको छ ? तपाईंले प्रयास गर्नु भएको होला तर सक्नु भएको छैन भने म तपाईंलाई एउटा उपाय दिन्छु, यसको लागि तपाईंलाई कुनै सफ्टवयरको जरुरत पर्दैन ।
सबभन्दा पहिला तपाईंले Start बटनमा क्लिक गर्नुस् त्यसपछी Run मा क्लिक गरेर त्यहाँ regedit टाइप गर्नुस् र ok गर्नुस् । यति गरे पछि तपाईंको Registry Editor पेज खुल्छ । अब तपाईंले त्यहाँ भएको HKEY_CURRENT_USER मा डबल क्लिक गर्नुस् त्यसछि Software मा डबल क्लिक , yahoo मा डबल क्लिक , Pager मा डबल क्लिक र लास्टमा Test मा क्लिक गर्नुस् । अब दाँया पट्टीको खाली ठाँउमा right mouse क्लिक गर्नुस् , New मा जानुस् अनी DWORD VALUE मा क्लिक गर्नुस् अनी नयाँ नाम राख्नुस् plural भनेर । अब तपाईंले आफुले बनाउनु भएको plural फाइल लाई डबल क्लिक गर्नुस् अनी Decimal मा tick लगाएर Value Data0लाई 1 बनाइदिनुस् र ok गर्नुस् । अब Registry Editor पेज लाई बन्द गरी दिनुस् । यति गरी सके पछि तपाईंको काम सकियो अब तपाईंले एकै चोटि २ वटा yahoo messenger खोलेर फरक फरक नाममा login गर्न सक्नु हुनेछ । "यदि तपाईंले Value Data0लाई2राखी दिनु भयो भने एकै चोटि ३ वटा सम्म messenger खोल्न सक्नु हुन्छ ।" एक चोटि ट्राइ गरेर हेर्ने कि ???
Posted by Bijay Mishra at 2:48:00 PM Labels: Messengers